Imikhiqizo Yezimali | Ezezimali Ezezimali (Ikhasi 4)
Ngalesi sikhathi enye indlela yokutshala imali yendabuko imelwe ukuthengwa kwekhaya ukuze kuqashwe kamuva
Amanani esizwe athinteke kakhulu enkingeni yaseTurkey
Leli hlobo lisinike isimanga esibi ukuthi abatshalizimali abancane nabaphakathi abangenawo. Lesi yisimo esibucayi kwezomnotho kuLokho okwenzeka eTurkey kuyisimo ababengenaso abatshalizimali futhi lokho ngokuqinisekile kubenza balahlekelwe yimali eningi.
Kufanele uyitshale nini imali emakethe yamasheya?
Ukuthenga nokuthengisa amasheya kungenye yezindlela eziphumelela kakhulu zokwenza inzuzo noma ukutshala imali, yize kungenazo izindlela zokuzivikela
Yize ama-IPO ethinta izinkampani ezingabhalisiwe ezimakethe zezimali, esizokwenza yilokho okubalwe emakethe yamasheya
Isichazamazwi Sesikhwama sabaqalayo
Ukutshala imali emakethe yamasheya kudinga ulwazi oluyisisekelo lokuqhuba imisebenzi ngeziqinisekiso ezinkulu zempumelelo. Akunakwenzeka ukuthi ngiyazi Enye yezinto ezizokuhlukanisa nabanye abatshalizimali abancane nabaphakathi ukwazi isichazamazwi esibanzi semigomo yesitoko
Yini okufanele uyenze uma ikhadi lilahlekile noma libiwe?
Ukulahleka kwekhadi lesikweletu noma lasebhange kusho ukuthi kufanele uthathe isinqumo ngokushesha okukhulu, ukwazisa lo mcimbi ebhange ngokushesha
Inzuzo ka-Endesa icishe ifane naleyo ye-bond
I-Endesa ingesinye sezibambiso ezisebenza kakhulu ezimakethe zamasheya nasezingeni lokuthi kunezinkulungwane nezinkulungwane zamasheya ezishintsha izandla
Ukuhweba emakethe yamasheya kusuka kwi-Intanethi, kepha ngeziqinisekiso
I-Intanethi isiphenduke ithuluzi elinamandla lokwenza imali. Ukusebenza kwayo kushesha kakhulu futhi nganoma yisiphi isikhathi sosuku, ngisho naku-Intanethi, sekuyithuluzi elinamandla lokwenza imali, lapho ukusebenza kwayo kushesha kakhulu futhi nganoma yisiphi isikhathi sosuku.
Iyini imali ebanjwayo ebanjiswayo?
Uma ucabanga ukuthi imali ebanjwayo ebuyiswayo iyimodeli yokuxhasa imali yasekhaya, uzobe wenza amaphutha kusukela kumzuzu wokuqala
Izindlela zokuqala ukutshala imali emakethe yamasheya
Vele, abatshalizimali abanolwazi oluningi ezimakethe zezezimali bazoba nezinkinga ezimbalwa zokuhambisa utshalomali lwabo ngendlela efanele.Ukuqala ukutshala imali ezimakethe zamasheya, kuyadingeka ukwenza uchungechunge lokhiye oluzosiza impumelelo yokusebenza ezimakethe zezimali.
Izimakethe ezivelayo: okungcono kakhulu ongatshala imali kuzona
Uma ufuna enye indlela yokulingana, lokhu ngokungangabazeki yileyo eyenziwe izimakethe ezisafufusa, ikakhulukazi kokunye ukushintshisana
Yini amapulatifomu okubolekisana kontanga?
Amapulatifomu okubolekwa kwemali phakathi kwabantu ahlinzeka ngezinsizakalo ezihlukaniswe ngokufanele nezinzuzo odinga ukuzazi njengamanje
Amathiphu ayi-10 wokonga imali ngokuhweba ngamasheya
Vele, inhloso enkulu nokuwukuphela kwabatshalizimali abancane nabaphakathi abanakho ukwenza imali ekusebenzeni kwabo ezimakethe zezimali ezingenayo.Yiqiniso, inhloso enkulu nokuwukuphela kwabatshalizimali abancane nabaphakathi abanakho ukwenza imali ekusebenzeni kwabo
Iphrimiyamu yokunisela ithinta kanjani ukutshalwa kwemali?
Njengoba ukusabalala kweprimiyamu yobungozi kuphezulu, kuzothinta ukwehla kwemali engenayo engaguquguquki kwazise izimakethe zamasheya zinamathuba amaningi okuwa kakhulu
Imali ekhokhelwa ubungozi iyithinta kanjani imakethe yamasheya?
I-premium yengozi ingenye yemingcele ebaluleke kakhulu yokunquma ukuvela kwezimakethe zamasheya. Hhayi ize, abatshalizimali bakubheka konke I-premium yengozi ingenye yemingcele ebaluleke kakhulu ukunquma ukuvela kwezimakethe zamasheya ngaphezu kwakho konke
Iyini intela yaseTobin?
Intela kaTobin noma i-ITF uhlobo lwentela ekuthengisweni kwezezimali okwakuhlongozwa emashumini amaningi eminyaka edlule ngusomnotho oholayo waseMelika
Njengoba kungumugqa wesikweletu enkampanini, idinga nezimo zenkontileka ezihlukile, lapho ihanjiswa khona njalo ngokusebenzisa ama-microcredits.
Ingabe kungcono ukuthatha imali eguqukayo noma engaguquki yemali mboleko?
Omunye wemibuzo ozozibuza yona okwamanje ukuthi ngabe kulula yini kuwe ukuthi ubhalise imalimboleko yempahla yakho ngamanani aguqukayo noma angaguquki
Ukuzuza kwemali emakethe yamasheya, yini okufanele uyenze nabo?
Ukukhula kwemali ezuzwayo, kuba ngcono ngezintshisekelo zakho, noma ngabe yiliphi igama lapho utshalomali lwakho luqondiswe khona.
Uma uzotshala imali oyilondolozile ezimakethe zezimali, akukho okunye ongakwenza ngaphandle kokuba wazi izikhungo okuyizona ezimaka amandla ezomnotho emhlabeni.
Yimiphi imikhiqizo yezezimali ongayitshala ezimali?
Ingxenye enhle yotshalo-mali yenziwa ngama-euro ngoba iyimali eningi phakathi kwabasindisi baseSpain. Kodwa-ke, akwenzeki kuphela ukusebenzisa Ukutshala imali kwezinye izinhlobo zamazwe omhlaba kukunikeza ithuba lokuthi utshalomali lwakho lungathuthuka ngokuya ngesivuno esenziwe.
Ukukhethwa kwezincwadi zamasheya ezikunikeza ngemibono emihle yokwenza imisebenzi yakho yezimakethe zamasheya ibe nenzuzo kusukela manje kuqhubeke kubaluleke kakhulu.
Noma ngubani ozotshala imali yakhe ezimakethe zezimali kufanele abheke okungenani amanye ala maqhinga ekuhlaziyweni Kwezobuchwepheshe kanye nokuyisisekelo akhiwe ngezinhlelo ezimbili ezihluke ngokuphelele kepha lezi ezimbili zingapheleliswa.
Imvula yokwahlukanisa ngokuqala kwehlobo
Ihlobo liphinda lifike futhi futhi lisezinyangeni zikaJuni noJulayi lapho ukwabiwa kwezabelo kufinyelela inani eliphakeme kakhulu lonyaka
Yimiphi imikhiqizo yesiliva ongafaka kuyo imali oyongile?
Enye yezimpahla zezezimali okwamanje ezakhiwe njengendawo ephephile yinto eluhlaza efana nesiliva elinikeza ukuvuselelwa okubalulekile
Kufanele wazi ukuthi i-PER ingenye yemingcele esetshenziswa kakhulu ukwazi ukuthi izimakethe zezezimali ziyabiza noma ziyabiza
Yini iminikelo yezimali ezixubekile?
Izimali ezibizwa ngokuxubene zinokwakheka okwehlukahluka kakhulu kusukela ziqala kusuka kumafa ezezimali ahlukahlukene nangohlobo oluhlukahlukene
Abathengisi abaku-inthanethi abazosebenza ezimakethe zamasheya
Vele, abathengisi be-inthanethi bangezinye zezindlela onazo okwamanje ukuhambisa ukusebenza emakethe yamasheya.
Ukwanda kwemali: kuyini, kwenziwa nini, njll.
Vele, uma ungumtshali-zimali omncane naphakathi, uzokwazi ukuthi ukwanda kwemali kuyinqubo exhumene kakhulu nezimakethe zezimali.
Izinkomba ezingaziwa kakhulu emakethe yamasheya aseSpain
Uzothola ama-stock indices azo zonke izinhlobo, okunye kwaziwa kakhulu kepha okunye ongeke neze uzwe ngakho.
Anjani amakhadi e-VIPS?
Vele, amakhadi e-VIPS angamapulasitiki angatholakali kunoma yimuphi umsebenzisi futhi mhlawumbe awatholakali nakuwe, kodwa kuphela kumakhasimende amahle kakhulu,
Ukubuyiselwa kwemali mboleko, kungcono ukunciphisa isitolimende noma inani lezitolimende?
Lapho ukwehliswa kwemali mboleko kwenzeka, imali eyayikhishwe phambilini iyabuyiselwa. Imvamisa izitolimende ziyakhokhwa
Liyini ibhidi lokuthatha kabusha?
Njengoba ingxenye enhle yabatshalizimali yazi kahle, ibhidi lokuthatha kabusha liyisichazamazwi sokuthi iyini ngempela ibhidi lokuthatha
Ungayigwema kanjani imali ekhadini lasebhange?
Amakhadi esikweletu asephenduke iphuzu eliyinhloko lokuthola ezinye zezinsimbi zokuxhasa ezithandwa ngabantu baseSpain ukuhlehlisa ukukhokha
Uhlelo lwempesheni luhlelwe njengomunye wemikhiqizo yezimali efanelekile ukubhekana nesikhathi sokuthatha umhlalaphansi
Sibiza ama-microloans umugqa omncane kakhulu wezimali othuthukiswa ngaphansi kwezimo ezithile zezentengiselwano futhi ongatholwa yinoma yimuphi umsebenzisi
Ama-akhawunti abuyisa amarisidi asekhaya
Ama-akhawunti asebhange ane-debit eqondile yezikweletu zasekhaya adinga ukuxhumanisa kuphela ukuze ujabulele amabhonasi
Yini ongayenza ngokulahleka kwemakethe yamasheya?
Abatshalizimali abancane nabaphakathi basesimweni sokusebenzisa amasu athile ukunqanda ukuncishiswa kwemali emakethe kuze kube yileso sikhathi, okungukuthi, ukulahleka kwemali.
Ungazivikela kanjani ekuguquguqukeni kwemakethe?
Kulo nyaka futhi naphezu kwazo zonke izingqinamba, isimo esishubile sesibuyele ezimakethe zezezimali ngemuva kweminyaka engaphezu kwemithathu ngaphandle kokuba khona kwaso ekusebenzeni.
Ngaso sonke isikhathi lapho umuntu eqasha noma yiluphi uhlobo lomshwalense, ikakhulukazi ezempilo, enye yezinto okufanele icatshangelwe isikhathi somusa.
Umkhakha wezezimali kunezindlela eziningi zokuthola imali, emakethe yamasheya omunye wemikhakha engaziwa kangako, sinezindlela zokusebenzisa ezimakethe zamasheya indlela ephumelelayo
Imali ayilali: utshalomali ngempelasonto
Eminyakeni yakamuva, inketho yokuhweba ngamathuluzi ezezimali ngezimpelasonto ibilokhu ivulekile, noma ivela ezimakethe ezinjalo ezintsha.
Ukudluliswa kungumsebenzi webhange owenziwa kaningi ngabasebenzisi abane-akhawunti yasebhange.
Ungatshala kuphi ukukhiqiza inzuzo enhle kakhulu
Izimakethe zezezimali zenza kube nokwenzeka ukuthuthukisa inzuzo ngenye indlela kodwa enenzuzo kakhulu yotshalo-mali
Tshala imali emakethe yamasheya, kepha kusuka kumadiphozithi etheimu
Lezi zimali zakha isu langempela lokunciphisa izingozi futhi, ngeshwa, zithole imbuyiselo kulondolozo lwakho edlula leyo yomkhiqizo wendabuko webhange.
Amasu okutshala imali: ungawasebenzisa kanjani?
Njengoba usebenzisa amanye amasu okutshala imali, kuzohlala kulula kakhulu kuwe ukwenza ukonga kube nenzuzo ngendlela eyiyo kakhulu.
Zonke izinkomba zemakethe yamasheya aseSpain
Kuzo zonke izinkomba zamasheya aseSpain, lezo ezibhekisa ezinkampanini zemali emincane naphakathi ziyagqama.
Uyini umehluko phakathi kokubuyela emuva nokubuyela emuva kwethrendi?
Vele, emakethe yamasheya, elinye lamaphutha amakhulu kakhulu elingenziwa ekuhlukaniseni lokho okuyimbuyiselo ngempela nokuthi yini ushintsho kumkhuba
Izikweletu zemvelo: ziyini izici zazo?
Enye yezinto ezahlukahlukene ezintsha ongazithola ekunikezelweni kwamabhange njengamanje yileyo emelwe yilokho okubizwa ngokuthi yizinto ezincane zemvelo
Amabhange umkhakha oshayeke kakhulu emakethe yamasheya
Ukungazinzi okubhekene nezimakethe e-Italy naseSpain kulezi zinsuku kujezisa kanzima ukuphepha okumelwe amabhange
Ukuntengantenga kwezepolitiki eSpain kufaka izimali kuleli hlobo
Esinye sezimo ezimbi kakhulu zezimakethe zezimali sifakiwe eSpain lapho bekucatshangwa okuncane futhi ukungazinzi kwezepolitiki
Ungazivikela kanjani ngokungazinzi kwezimakethe zezimali?
ISpain, i-Italy, iMiddle East kanye neNyakatho Korea ngamanye amaphuzu ezindawo angeza ukungazinzi ezimakethe zezezimali
Izinto zokusetshenziswa ekudleni: okunye kunokutshala imali
Izinto zokusetshenziswa zidlala indima enamandla yokuphephela lapho kunezimo ezingezinhle neze ezimakethe zezimali
Uma kukhona ukuphepha okunendawo yokuthenga kumasu okuthenga wamanje, akuyona enye ngaphandle kwenkampani kazwelonke kawoyela iRepsol.
Amabika amabi ezimakethe zezezimali afakiwe e-Italy, ngenxa kahulumeni omusha ozokwakhiwa phakathi kwe-5-Star Movement neLa Liga.
Omunye wemishini yakho njengomsebenzisi wasebhange oyikho ukukhomba ukuthi ngabe imali obolekiswe ngayo osanda kuyithola ithwala isigatshana saphansi
Uneminyaka emingaki okufanele unikele ukuqoqa impesheni encane?
Ukufaka isandla ekuqoqeni impesheni ephansi, kudingeka iminyaka eyi-15 ubuncane, yize kunelungelo lokuqoqa amanani aphansi kuphela
I-ACS ne-Siemens, amasheya amabili ane-Ibex 35
Kunoma ikuphi, bobabili i-Nokia Gamesa ne-ACS bahole phambili engxenyeni yokuqala yalesi semester esiyinkimbinkimbi emakethe yamasheya
Ama-akhawunti akhokhelwayo: aqukethe ini?
Ama-akhawunti akhokhelwayo angumkhiqizo obalulekile wasebhange, kepha akunikezi noma yiluphi uhlobo lwentshisekelo futhi kulula kakhulu ukubhalisa
Ukuqiniswa kwedola kuthinta kanjani izimali zakho?
Uma ufuna ukusebenzisa ngokunenzuzo ukunyuka okuphezulu kwedola laseMelika kuqhathaniswa ne-euro, inketho eyanelisa kakhulu ukukhetha imisebenzi yokuhweba
I-Russia Stock Exchange, Isimanga Salo nyaka Esingenzeka
Uma kukhona imakethe yamazwe omhlaba engaba nenzuzo kulo nyaka, akungabazeki ukuthi iRussia enezinketho zokukhiqiza inzuzo enkulu
Izimakethe zamasheya zase-Europe zizama ukufezekisa isinqumo se-United States sokushiya isivumelwano se nyukliya ne-Iran futhi lokho kungabhebhethekisa izimakethe.
Enye yezinhloso ezifanele kakhulu ze-fibonaccio ukusungula izindawo zokusekela nezokumelana lapho zizohweba khona emakethe yamasheya.
Ukukhanselwa kubeke izinhlawulo ezisukela ku-1% kuye ku-3%.
Ngazi kanjani ukuthi ngisezinhlanganweni zezezimali?
Ukuqinisekisa ukuthi ubhalisile ngempela ohlwini lwabangakhokhi i-ASNEF, kufanele ufake iwebhusayithi yabo kuphela
Kulo nyaka i-euro ingaba impahla yezezimali efanelekile ukucacisa ukuvela kwezimali ezinyangeni ezizayo
Izimalimboleko ngaphandle kwamaholo: kungenzeka?
Imali mboleko engenayo inkokhelo ingenziwa ibe semthethweni, hhayi kuphela emabhange, kepha kusuka kuzingxenyekazi nezinhlangano zezezimali
Iyini i-BPA futhi ibaluleke ngani?
I-EPS noma umholo ngesabelo ngasinye kungenye yemingcele okufanele icatshangelwe ukungena ezimakethe zezimali
Ama-akhawunti angenawo amakhomishini
Vele, ama-akhawunti angenawo amakhomishini angenye yezinhloso zabasebenzisi bamabhange ukukhulisa ukonga kwabo
Ukungazinzi kuyimbangela ezimakethe zezezimali ezingenza imali uma isimo esifiselekayo sihlangatshezwa emnothweni
Ngokuqinisekile uzwile kaningi kwesinye isikhathi ukuthi yini okuphuma kwezezimali. Ngenhloso eyinhloko yokutshala imali kule mikhiqizo ukukhulisa inzuzo yezimpahla zakho
U-Iberdrola wethula isicelo sokuthatha inkampani yaseBrazil
U-Iberdrola uthathe isinqumo sokwethula isicelo sokusatshalaliswa komsabalalisi waseBrazil u-Eletropaulo ngenhloso yokuthenga phakathi kuka-51% no-100% wabanini bamasheya.
Ama-akhawunti angenawo amakhomishini anganeliswa ngamasu amaningi azokhiqiza ukuthi amaklayenti angakhokhi noma iyiphi i-euro ngokuphathwa kwawo
Ukuhlaselwa okuhlangene eSyria kuthinta imakethe yamasheya?
Ukuhlaselwa okuhlangene eSyria kungalimaza ukuvela kwemakethe yamasheya uma kugcinwa ngokuhamba kwesikhathi, into engenzeki
Ungayibona kanjani i-peas?
AmaChicharros abhalwe ukuphepha okuvame kakhulu ukusebenza ngokuqagela nokwenza imali ngesikhathi esifushane
Ayini amakhadi abonakalayo futhi enzelwe ini?
Amakhadi we-Virtual akhelwe ngokuyisisekelo kunoma yiluphi uhlobo lokuthenga okuku-inthanethi futhi mahhala
I-Arcelor noma i-Acerinox? Yikuphi ukukhetha okuhle kakhulu
I-Arcelor ne-Acerinox zilandelwa inani elikhulu labatshalizimali abancane nabaphakathi abahlola ukuthi amanani entengo yabo angavela kanjani kulo nyaka
I-akhawunti ye-Facto: ukwenza ngcono inzuzo yokonga
I-akhawunti yeFacto yethulwe ngaphansi kwemodeli yenkontileka ephindwe kabili. Ngakolunye uhlangothi, i-akhawunti yokuhlola ngakolunye idiphozi enenzuzo enkulu
Izabelo ngo-Ephreli ukulwa nemakethe yebhere
U-Ephreli uyinyanga ethakazelisa kakhulu yokukhokhwa kwezinzuzo futhi lokho kungashintsha amasu akho ngokuqala kwekota yesibili yonyaka.
Imali mboleko ne-Euribor, zihlobene kanjani?
Ubudlelwano phakathi kwemali ebolekwa kanye ne-Euribor ekugcineni kuzonquma izindleko okufanele ubhekane nazo kulo mkhiqizo
I-sicav uhlobo lweSikhungo Sokutshalwa Kwezimali Esihlanganyelwe senkampani, inhloso yayo kuphela ukuthola imali
Izimakethe ezivelayo zingaba enye indlela enenzuzo enkulu njengamanje, ngabe ufuna ukwazi ezinye zezizathu ezibaluleke kakhulu?
I-ACS ne-Atlantia ibhidi yokubuyisa i-Abertis
Inkampani yokwakha i-ACS, ngoHotchief, isiqinisekisile isivumelwano "esibophezelayo" sokuqalisa umkhankaso wokuhlanganyela wokuthatha i-Abertis.
Ukutshalwa kwemali kwesikhathi eside: okudingeka ukwazi
Isikhathi eside yisikhathi saphakade esidinga isu lokutshalwa kwemali elichazwe kahle kanye namanani athile.
Isigaba esiphansi kwempahla ebanjiswayo singafihlwa ngamabhange ngegama lobuchwepheshe kakhulu labasebenzisi
Yini ama-chip eluhlaza okwesibhakabhaka?
Amachips aluhlaza okwesibhakabhaka yizibambiso ezethula ukwenyuka kwemali ephezulu kunamanani ezinikeza uchungechunge lwezimpawu ezichazwe kahle
Imali mboleko yesilinganiso esinqunyiwe noma esiguqukayo?
Isinqumo senkontileka yemali mboleko engaguquki noma eguqukayo sincike ekuziphendukeleni kwayo ezimakethe zezezimali, kanye nesikhathi saso sokukhokha.
Ukuguquguquka inani elihlukile lokutshala imali
Ukuguquguquka kungenye yezindlela zokutshala imali ngezikhathi lapho ukuvela kwemakethe yamasheya kungathandeki
Iphothifoliyo ye-mutual fund elinganiselayo ingenye yezindlela zokupheka ezingcono kakhulu zokonga imali ezikhathini ezinzima kakhulu
Amanani wokujikeleza kulula ukuwabikezela ngoba amanani awo ancike kumjikelezo wezomnotho lapho imakethe yamasheya iba khona
Imali ebolekwa ifaka phakathi uchungechunge lwezindleko ezizokwenza umkhiqizo ubize kakhulu ngamakhomishini, izinqubo nezenzo
Ngabe imali eqinisekisiwe kungumbono omuhle wokutshala imali?
Izimali ezihlanganyelwe eziqinisekisiwe zikunikeza ithuba lokugcina imali engenayo engaguquki futhi eqinisekisiwe njalo ngonyaka
Ungakulandelela kanjani ukutshalwa kwezimali kwakho?
Isidingo sokuphatha kahle ukonga ukugcina umkhondo wamasheya, imikhakha kanye nama-stock indices ngokuvuselelwa kwawo
Imali mboleko yokutshalwa kwemali futhi igweme ukusebenza okubi emakethe yamasheya
Izimalimboleko zokutshala imali zenzelwe ukuthi abatshalizimali kungadingeki bahlukane namasheya abo okungenani ngezikhathi ezingezinhle
Ungagwema kanjani amaphutha onyakeni odlule?
Elinye lamasu okwenza ukuthi amaphutha angaveli kulo nyaka ukuveza ukuthi yimaphi enzekile ngonyaka odlule
Yini i-PER futhi isetshenziswa kanjani ukusebenza emakethe yamasheya?
I-PER ingenye yemingcele ebaluleke kakhulu yokukhetha inani emakethe yamasheya futhi ikhombisa ukuthi intengo iyabiza noma ishibhile
Ungathengisa kanjani ngokulungiswa?
Izilungiso akufanele zithathwe njengezimbi, kodwa ithuba elihlinzekwa izimakethe zokuthenga eshibhile
Izinkinobho ezinhlanu zokuvikela isikhwama sakho sokutshala imali
Ekutshalweni kwemali kunezihluthulelo ezivumela ukonga ukuthi kulawulwe kahle, kanye nokuzivikela ezimeni ezingezinhle.
Imikhiqizo engu-6 ongayitshala emakethe yamasheya ewayo
Ebhekene nesimo esingesihle, abatshalizimali banochungechunge lwemikhiqizo yezezimali engenza ukonga kube nenzuzo
Izeluleko eziyi-9 zokubhekana ngempumelelo nemakethe yamasheya ngonyaka we-2018
Ukutshala imali emakethe yamasheya kulo nyaka kudlulisa uchungechunge lwamathiphu azokwenza kube lula kuwe ukwenza imbuyiselo ngokuya ngentshisekelo yakho
Umkhakha wezokuvakasha ngezibalo
Ezokuvakasha zingenye yemikhakha ekhulayo futhi amanani azo angakha iphothifoliyo yethu yokutshala imali ezinyangeni ezizayo
Yiziphi izibalo eziyinhloko emakethe yamasheya?
Izibalo zibalulekile ukucacisa ukusebenza emakethe yamasheya, kokubili ngokuthenga nokuthengisa
Kuyini ukukhishwa kwemali kumikhiqizo yokutshalwa kwemali?
Ukutholakala kwemali ekutshalweni kwemali kufanele kungabi nenye yezinjongo ngaphandle kokungabaza uma ungafuni ukuba nezinkinga ezingaphezu kweyodwa ngomhlaba wemali.
Yiziphi izinzuzo zokuba i-Ibex ikwazi ukuya kumaphoyinti angama-9.000?
Ubuthakathaka bufakiwe ku-Ibex 35, noma okwamanje intengo yezibambiso ingasho ithuba lokuthenga
Ibex MAB: ama-indices amasha emakethe yamasheya aseSpain
Kusukela kulo nyaka odlule, i-MAB ihlinzeke ngama-indices amabili emakethe yamasheya lapho ungenza khona imali oyongelayo, ingabe uyazi ukuthi injani?
Amanani amahle kakhulu wokutshala imali
Lo nyaka ungaba yithuba lokutshala imali kumasheya amaningi emakethe yamasheya, njengalawo asilele kakhulu
Zonke izimali zokutshala imali ongaziqasha
Kunezimali eziningi kakhulu zokutshala imali ongazivumelanisa nezimo ezahlukahlukene zezimakethe zezimali nephrofayili oyivezayo
Imakethe yamasheya yaseMelika yehla ngo-5%, kungaba ukuqala kokuwa okuningi
Ukuwa emakethe yamasheya aseMelika kungaba yisixwayiso sokuthi okuthile akulungile emnothweni wamazwe omhlaba, ngokuwa okukhulu
I-Bitcoin ilahlekelwa yi-50% yenani layo ngesonto eledlule
I-Bitcoin yehlise cishe i-50% kuze kube manje kulo nyaka, okuqinisekisa ubungozi obukhulu kuleli banga lokutshalwa kwemali
I-Abertis: enkabeni yokusebenza kwebhizinisi
I-Abertis ingelinye lamasheya aseSpain ashisa kakhulu ekunyakazeni ngenxa yemicimbi yezinkampani okuyiyo okudingidwa ngayo
I-Enagás neGesi Yemvelo ezansi kwemakethe yamasheya aseSpain
I-Enagás ne-Gas Natural yizitoko ezenza kabi kakhulu kulo nyaka emalini yaseSpain
Ngabe imisebenzi ye-cryptocurrency kufanele yenziwe njalo?
Impikiswano ebalulekile yakha ukuthi ngabe kuyadingeka yini ukulawula imisebenzi eyenziwa ngama-cryptocurrensets ngenxa yengozi yawo enkulu
Ingabe yisikhathi sokutshala imali emkhakheni wezokwakha?
Ukwakhiwa kungenye yemikhakha efanelekile yemakethe yamasheya yaseSpain ngenxa yokuvuselelwa kwalo mkhakha
I-More Mobile isivele ihweba ngamazinga angama-euro angama-100
IMás Móvil ingenye yezindinganiso ezishisa kakhulu zezimali zaseSpain futhi ifinyelele kuma-euro ayikhulu ngesabelo ngasinye
Yiziphi izizathu zokungena ku-bandwagon ye-bitcoin?
Uyazi ukuthi yiziphi izizathu zokutshala imali ku-bitcoin? Kulolu lwazi uzothola ezinye izinkinobho ezifanele kakhulu
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani kulo nyaka utshale imali yakho emakethe yamasheya, ngabe ufuna ukwazi ukuthi yiziphi ezinye ezifanele kakhulu?
Ikhadi lesikweletu liyinsimbi yezezimali lapho ibhange likunikeza inani lemali ongalisebenzisa ukuthenga imikhiqizo nezinsizakalo
Ivolumu ekunikezelweni kwenkontileka ipharamitha okufanele kubalwe kuyo ukuthenga noma ukuthengisa amasheya ezimakethe zezimali
Imiphumela yezinkampani kulo nyaka izothatha isinqumo ukuze imisebenzi yokuthenga emakethe yamasheya ibe nenzuzo
Kulo nyaka kuzodingeka sazi kakhulu ngamathuba ebhizinisi ukuzama ukwenza imisebenzi enenzuzo ezimakethe
Ingabe yisikhathi sokutshala imali ku-oyela?
Uwoyela usesimweni esibucayi esenza ukuthi akwazi ukuthatha izikhundla kulo nyaka osanda kuqala
Ingabe kungcono ukuya kwinzuzo noma ezinkampanini ezikhiqiza inani?
Okunye ukungabaza kwabatshalizimali ukuthi kufanele bakhethe ukuphepha okunenzuzo noma ngokuphambene nalokho okungakhiqiza inani, njengecebo lokutshala imali
Izinkinobho ezi-6 zokunquma ukuvela kwemakethe yamasheya ngo-2018
Uma ungafuni ukumangala kabi kulo nyaka, kufanele uhlaziye okhiye bokulungiselela iphothifoliyo yakho yokutshala ngalesi sikhathi
Qala unyaka omusha emakethe yamasheya eqoqa izinzuzo
Izindaba ezimnandi zabatshalizimali kuzoba ukuthi izabelo zizokwenyuka ngo-2018, ngenzuzo ezuzisa kakhulu
Uwoyela ekukhanyeni kwabatshalizimali
U-oyela ungenye yezimpahla zezimfashini zezimali lapho ukhuphuka ezikhundleni futhi ungena ku-uptrend okungaba mnandi ukuthatha izikhundla
Ama-Bitcoins namanye ama-cryptocurrensets ongafaka kuwo imali
Ngaphakathi kwama-cryptocurrensets, akuwona ama-bitcoins kuphela akhona kepha nezinye izimali ezibonakalayo ezivela ezimakethe
Isikhwama sokuqala sokutshala imali kumaBitcoins
Isikhwama sokuqala sokutshala imali esuselwa kuma-bitcoins sakhiwe futhi manje sesingabhaliswa ngabatshalizimali abancane
Zizoziphatha kanjani izimali ngo-2018?
Izimali zingaletha ezinye izimanga kulo nyaka, ngabe ufuna ukwazi okunye okufanele kusukela manje?
Yiliphi isu elizosetshenziswa ku-2018: ukuphathwa okusebenzayo noma okungenzi lutho?
Imodeli yokuphatha izonquma kulo nyaka ukwenza ngcono inzuzo kumasheya, okungenzeka angaphansi kohlelo olusebenzayo noma olungenzi lutho.
I-Spotofy ilungiselela i-IPO yayo
I-Spotofy izoba ngesinye sezibambiso ezingangena emakethe yamasheya phakathi nonyaka futhi kuzoya ngentengo yayo ukubhalisela amasheya ayo
Amanothi okuqala emakethe yamasheya esivivinyweni esisha
Ukuqala konyaka omusha kuletha amanothi athile angathakazelisa kakhulu ukwenza imisebenzi yokuqala emakethe yamasheya
Ungayitshala kuphi imali yakho uma unayo "ingane"?
Imibono emihle yokutshala imali uma ungomunye wabaphumelele engqungqutheleni yengane ezokwenzeka esontweni lokuqala lonyaka wezi-2018
Isimo somnotho sithinta kanjani imakethe yamasheya aseSpain?
Umnotho ukuhlinzeka ngochungechunge lwemininingwane ebalulekile kuwe ukuze uthathe izikhundla emalini
Izifiso eziyishumi kubatshalizimali ngo-2018
Unyaka ka-2018 kuzofanele uthintwe ngethemba futhi ngalokhu kunochungechunge lwezifiso abatshalizimali abanethemba lokuthi zizofezeka kulo nyaka
Unyaka lapho i-Ibex 35 ihloniphe amaphuzu ayi-10.000
U-2018 uphela nge-Ibex ngokuhlonipha izinga le-importanet lamaphoyinti ayi-10.000 XNUMX futhi elizosebenza njengesethenjwa sonyaka ozayo
Ungakuthuthukisa kanjani ukusebenza kwezimo zakho kulo Khisimusi?
Ukufakwa kwethemu kuveza inzuzo ongayithuthukisa ngokusebenzisa amasu ahlukahlukene maqondana nephrofayili yakho
Izimanga eziyisithupha ezingenziwa izazi ngeMagi
Yiziphi ezinye zezipho ezingakuphathela amadoda ahlakaniphile kulo nyaka? Sikunikeza ezinye iziphakamiso ezingasiza
ICatalonia ibhalwe ohlwini lwesitoko futhi
Imiphumela yokhetho eCatalonia ingumthombo wokungabaza okusha okungathinta izimakethe zezimali
Izimo eziyisithupha ezingenzeka ngo-2018
Ku-2018 omusha, ezinye zezimo ezingase zivele futhi ezizothinta ubudlelwane bakho nemakethe yamasheya zicace bha.
Inhloso yemakethe yamasheya ka-2018: amaphuzu ayi-11.000
Inhloso ebekwe ku-2018 ezimakethe zokulingana zaseSpain inkomba yayo enkulu ukufinyelela emazingeni amaphuzu ayi-11.000
Yini okufanele uyenze ngokulungiswa okungenzeka ngo-2018?
Ukulungiswa konyaka ozayo ngesinye sezimo ezidalwe abanye babahlaziyi bezezimali ababaluleke kakhulu
Ikusasa kuma-bitcoins: enye indlela yokutshala imali
Ikusasa le-Bitcoin lingenye yezindlela zakamuva zokutshalwa kwezimali futhi livumela ukukhiqiza inzuzo enkulu ekusebenzeni
I-Black November yemakethe yamasheya yaseSpain?
Inyanga kaNovemba ayikaqali ngendlela enhle kwazise kunezinto eziningi ezinomthelela ekuhambeni kwemakethe yamasheya yaseSpain
Kungaba yisikhathi sokushintshwa komjikelezo e-Inditex
Ngokokuqala ngqa i-inditex ingaba yinani lemakethe yamasheya eliyingozi, ikakhulukazi uma liwela ngaphansi kwezinga lama-euro angama-29 kusabelo ngasinye
I-Litecoin enye indlela yokutshala imali kuma-cryptocurrensets
I-Litecoin ingenye yezimali ezihlukile ze-bitcoin futhi lokho kudala okulindelwe okukhulu ekuhlaziyweni kwayo
I-Bitcoin yenza i-debut yayo emakethe yamasheya ngokwazisa nge-10%
I-Bitcoin yimali ebonakalayo ekhishwe ezimakethe zezezimali ngokubuyekezwa ekuqaleni okungaphezulu kwe-10%
Imibono eyisithupha yokwenza imali kulo Khisimusi
Lo Khisimusi kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo ukwenza imali izuze. Ngabe ufuna ukwazi okunye okufanele kakhulu kulo nyaka?
Ungayitshala kanjani i-jackpot yelotho kaKhisimusi?
Uma lo Khisimusi ushaya i-jackpot yelotto, ungaqhubeka nokukhulisa ama-winnings akho. Kepha ngabe wazi ngayiphi indlela?
Izinkinobho zokulinda lapho utshala imali emakethe yamasheya
Ukulinda ukwenza imisebenzi kubandakanya izinzuzo ezilandelanayo, ngabe ufuna ukwazi okunye okufanele kakhulu ukuvikela izintshisekelo zakho?
USniace ubonga cishe ngama-20% kuleli sonto
ISniace ingenye yezindinganiso ezishisa kakhulu emalini yaseSpain, ethola cishe u-20% kuleli sonto
Yini inani elibi kakhulu le-Ibex 35?
Okwamanje iMapfre adlula kuyo akuyona engcono kunazo zonke, kepha nganoma yisiphi isikhathi intengo yamasheya ayo ingakhuphuka kakhulu
Izimali zokutshala imali: ukudluliswa kwamahhala njengenzuzo enkulu
Ukudluliswa kwemali esikhwameni sokutshalwa kwemali kungukusebenza okungasiza kakhulu futhi okungaholela ekutheni ube nentela ephakeme
Izikhungo ezi-5 zamandla izimakethe zamasheya ezincike kuzo
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi iziphi izikhungo zamandla wezezimali? Naka kancane ngoba bangakunika isignali ekutshalweni kwemali
Thenga iphepha noma igolide elibonakalayo, kuyini?
Igolide lingenye yezimpahla zezezimali ezinenzuzo enkulu kulo nyaka, kepha ingabe uyazi ukuthi ungahlukanisa kanjani phakathi kwegolide elibonakalayo nelingokoqobo?
AmaChicharros avele ngonyaka we-2017
I-chicharros yezimali zaseSpain kube ngamanani athandwa kakhulu ngamanani abo kulo nyaka
Izeluleko eziyisikhombisa zokutshala imali oyongele ngokuphepha
Ngochungechunge lwezeluleko zokutshala imali ungazihlinzeka ngokuvikeleka okukhulu ekusebenzeni kwemakethe yamasheya futhi uvikele izintshisekelo zakho
Izimali zokutshala imali ezi-6 okungafanele zilahleke kuphothifoliyo yakho
Kunezimali eziningi zokutshala imali okungafanele zilahleke kuphothifoliyo yakho yokutshala imali, uyafuna ukwazi ukuthi yini ezinye zazo?
Ingabe kunenzuzo ukubhalisela uhlelo lwempesheni kusukela ngisemncane kakhulu?
Uhlelo lwempesheni lungaba yisitshalomali sokubhekana nesikhathi sokuthatha umhlalaphansi, noma ngabe ubhalise usemncane kakhulu
Inqubomgomo yemali ikuthinta kanjani ukutshalwa kwemali kwakho?
Inqubomgomo yemali ibaluleke ngokwengeziwe ukucacisa ukuvela kwezimakethe zezimali nokunquma ikusasa lakho
Ngabe uMsombuluko omnyama ungaba khona emakethe yamasheya?
Ngenxa yezimo zezimakethe zezimali namuhla kunzima kakhulu ukuthi uMsombuluko omnyama omusha ugcwaliseke emakethe yamasheya
Ibex 35 ingena esigabeni se-bearish
I-Ibex 35 iguqule ukuthambekela kwayo ize ibe yi-bearish, engacindezela ukusebenza kwakho emakethe yamasheya kusukela manje kuqhubeke
Ngabe ufuna ukuba nesibindi emakethe yamasheya? Iziphakamiso zokusebenzisa lo mbono
Ukuze ube nesibindi emakethe yamasheya ngeke kube khona okunye ongakwenza ngaphandle kokukhetha amanye amasu okutshala imali ukwenza ukonga kube nenzuzo.
I-Enagás neRed Eléctrica, izindawo ezimbili eziphephile emakethe yamasheya aseSpain
I-Red Eléctrica ne-Enagás ngezinye zezindinganiso ezizinzile kakhulu ezinikezwa ngamasheya aseSpain ngephrofayili elandelanayo kakhulu
I-Repsol ihlala ingaphansi kokulungiswa kwamanani ayo
Intengo yamasheya eRepsol ingaphansi kokulungiswa, kepha noma kunjalo igcina amandla wokuhlaziya aphawuleka kakhulu
Ukuphathwa okusebenzayo noma okungenzi lutho emakethe yamasheya?
Esinye sezici okufanele sicatshangelwe lapho utshala imali ukuthi ngabe utshalomali kufanele lusebenze noma lube nje ngoba kuningi umehluko phakathi kwalokhu okubili.
IColonial yethula ibhidi yokuthatha i-Axiare
IColonia real estate ihola ibhidi lokuthatha kabusha lakamuva ezimakethe zamasheya, kepha ngabe uyazazi izimo zalo?
Ukuvela okungalingani kwezinto zokusetshenziswa
Izimpahla zingenye yezindlela zokutshala imali lapho izimakethe zendabuko zingazinzile kakhulu noma zidala ukungabaza phakathi kwabasindisa imali
Abakwa-Pharmamar abalinde ukuvunywa kwe-Aplidin
I-Pharmamar ingenye yezokuphepha ezisebenza kakhulu emakethe yamasheya yaseSpain encike ekuvunyelweni kwesinye sezidakamizwa zayo ezibaluleke kakhulu
Yini okufanele uyenze lapho abezindaba abalulekile belahlekile?
Amanani entengo ezisekelweni azothatha isinqumo ukuze ukwazi ukwenza ukuthengwa nokuthengiswa kokusebenza ngokusemthethweni emakethe yamasheya kube semthethweni
Amasheya ama-Chinese tech, kungani?
Amanani wezobuchwepheshe akhiwa njengenye yamathuba ebhizinisi okukhulisa utshalomali lwakho kusuka manje
Ungakusebenzisa kanjani ngokunenzuzo ukukhuphuka kwezinsimbi?
Izinsimbi zingenye yezimpahla zezezimali ezikhulayo nokuthi ungasebenzisa ngokunenzuzo ngokusebenzisa amasu athile okwenza imali oyongile ikwazi ukuzuzisa
I-FED izoba nombusi omusha: izothinta kanjani imakethe yamasheya?
I-FED izokhipha umbusi omusha, yize into ebaluleke kakhulu ukwazi ukuthi izothinta kanjani izimakethe zezimali
Izizathu eziyi-7 zokukhetha i-Ibex 35
I-Ibex 35 ingelinye lezindawo ongatshala kuzo imali yakho, kepha ngabe ufuna ukwazi noma yiziphi izizathu zokukhuthaza leli su lokutshala imali?
Ingabe yisikhathi sokungena emakethe yamasheya aseSpain?
Omunye wemibuzo yabatshalizimali maqondana nesimo esisha seCatalan ukuthi ngabe isikhathi esifanele sokungena emakethe yamasheya aseSpain
Ukutshala imali kwimvelo, okuthile okungaphezu kwemfashini
Imvelo nayo ingaba nenzuzo futhi ingatshala kuyo ngokusebenzisa imikhiqizo ehlukene kanye namasu okutshala imali.
Ngabe kungalimaza iGrifols ukuba ukuphela kwenkampani yaseCatalan ku-Ibex?
AmaGrifols ukuphela kwenani leCatalan elihlala ku-ibex 35, ngabe uyafuna ukwazi ukuthi yiziphi ezinye zezici zalo ezifanele kakhulu?
Ungabhekana kanjani nokheshi okuvela kuzimali zakho ozitshalile?
Ukugcina imali ku-akhawunti yamanje kufanele usebenzise amasu athile emakethe yamasheya, ngabe ufuna ukwazi okunye okubaluleke kakhulu?
Ungathengisa kanjani ku-uptrend?
Uyazi ukuthi ungahweba kanjani e-uptrend? Sikunikeza ezinye zezihluthulelo zokusebenza kulesi simo emakethe yamasheya
Abatshalizimali baseSpain babalekela emalini engenayo engaguquki
Abatshalizimali baphendukela kumholo ohleliwe ngokwesaba ukwehla kwamandla omnotho ezimakethe zezimali
Ungayisebenzisa kanjani imali yesikhathi eside?
Ukutshalwa kwezimali okude kudinga izici ezikhetheke kakhulu ukuze ukwazi ukuvula izikhundla kusuka manje
Izikhiye zokuqonda ukuvela kweNaturhouse emakethe yamasheya
INaturhouse ingenye yezokuphepha emakethe yamasheya yaseSpain eheha ukunakwa okukhulu phakathi kwabatshalizimali abancane nabaphakathi
Amazwi amakhulu lapho imakethe yamasheya incike khona
Kunamazwi endaweni yamazwe omhlaba lapho ukuncika kwezimakethe zezimali kuncike khona futhi kuthonya ukusebenza kwezimakethe zamasheya
I-Bitcoin iwela ngaphezu kwe-30% ngoSepthemba
Ukutshalwa kwezimali ku-bitcoin kuncipha ngenxa yokungazinzi okukhulu kwalesi sakhiwo sezimali. Ingabe yisikhathi sokuvula izikhundla?
Ukutshala imali emakethe yamasheya ngemali engenayo engaguquki
Ukutshalwa kwezimali emakethe yamasheya nakho kungadluliselwa ngemali engenayo engaguquki ngemikhiqizo enjengamadiphozithi ethemu noma izimali zokutshala imali
Imali ibalekela izimakethe zaseSpain
Imali ibalekela izimakethe zezimali zaseSpain, ngaphambi kwalokho abatshalizimali kumele basebenzise amasu athile ukwenza imisebenzi yabo ibe nenzuzo
Ukuphathwa: yini oyidingayo ekutshalweni kwemali?
Ukuphathwa okulungile kokutshalwa kwezimali kudinga isenzo esithile kubatshalizimali: ingabe ufuna ukwazi ukuthi kuyini?
Isibopho saseJalimane negolide: umlingani womdanso wokutshala imali
Ama-bond aseGerman negolide kungenye yezitshalo-mali ezinenzuzo enkulu, kepha ngabe uyazi izizathu zalesi siqiniseko?
Kukumaphi amazwe lapho ungahambisa khona utshalomali lwakho?
Kunamanye amazwe lapho ungaqondisa khona utshalomali lwakho ezimweni ezingezinhle neze zezimali zaseSpain
Ubhasikidi ophephile wezikhathi ezinzima
Ebhekene nezikhathi ezinzima, akukho okungcono kunamanani okuphepha okuphephile okwenza ukonga kube nenzuzo. Ngabe ufuna ukwazi ezinye iziphakamiso?
Izinkampani ezishiya iCatalonia zihweba kakhulu emakethe yamasheya
Izinkampani eziningana eCatalonia zithathe isinqumo sokuhlala kwezinye izingxenye zeSpain, kepha kuzoluthinta kanjani utshalomali lwakho emakethe yamasheya?
Ngabe kuwukuhlakanipha ukonga nokutshala imali ebhange laseCatalan?
Kunabasebenzisi abaningi abacabanga ukuthi bangaxhumana kanjani nebhange laseCatalan uma ukuzimela kweCatalonia kuphelile
Nakulokhu futhi, iTelefonica emehlweni opharetha
ITelefónica ithole umfutho omusha ngezincomo zabalamuli abahlukahlukene bezezimali abangakhuphula intengo yayo
I-Bankinter yeluleka ukuba semakethe yamasheya esikhathini esiphakathi
I-Bankinter, ngokuhlaziywa kwayo kwamakota onke, yenza uchungechunge lweziphakamiso zokutshala imali ekulondolozweni kwamasheya ngeziqinisekiso ezinkulu
I-repsol izoba nzima ukweqa ama-euro angama-16
I-Repsol njengamanje ibhekene nesikhathi esibaluleke kakhulu, lapho ihlangana nenye yezindaba ezifanele kakhulu
5 amagugu okulala ngokuthula
Elinye lamasu atholakala kubatshalizimali ukwakha iphothifoliyo ngokuya ngeziphakamiso ezilondolozeka kakhulu emakethe yamasheya.
Ukwehla kwentengo kawoyela kuhlanganisa uchungechunge lwamanani azohlomula futhi abanye balimale, uyazi ukuthi ayini?
ICatalonia iqala ukukala emakethe yamasheya aseSpain
Isimo eSpain sesiqala ukuthonya imakethe yamasheya yaseSpain, noma umbuzo uwukuthi ngabe le mibuthano izoba yimbi yini.
6 okhiye ukwehlukanisa kahle utshalomali
Ukutshalwa kwemali okuhlukahlukene kuyisu eliyisihluthulelo, hhayi nje kuphela lokuthuthukisa inzuzo, kodwa ukuvikela izikhundla ezivulekile
Ukubheja kwemakethe yamasheya okubabayo kakhulu ekwindla
Sikunikeza ukubheja kuma-equities asekuqaleni futhi okunikeza ithuba lokubuyekeza ngaphezu kwesilinganiso semakethe yamasheya
Izenzo ezihamba njengokudubula ngezikhathi zempi
Izinqubo zempi ziyingozi ezimakethe zokulingana, kepha kusenamasheya asebenza kahle kulezi zimo
Nikeza inani ukudala isikhwama sokonga
I-Enagás ingesinye sezitoko ezizinzile kakhulu emakethe yamasheya yaseSpain futhi ibuye isabalalise idividendi ngesivuno cishe esingu-7%
Ikhadi lesikhwama semali
Ikhadi lemali. Esinye sezakhiwo zalesi simiso ukuthi izinkokhelo ezenziwe ngalolu hlobo lwekhadi ukuthi ziyizinkokhelo zamanani aphansi
Ama-ETF ukuvula izimakethe ezisafufusa
Ama-ETF emazweni asafufusa angaba enye yezindlela okufanele uthuthukise ngazo ama-margins wembuyiselo yakho oyitshalile
Amathrendi adingeka ngokuphelele ukuthatha isikhundla ezimakethe zezimali, kanye nokwenza ukuthengisa kube semthethweni
Amaqiniso azothinta imakethe yamasheya ngekota edlule
Imicimbi efanelekile emalini izonquma ukuqinisekisa ukuthi yini ezoba ukuvela kwezimakethe zezimali
Yini okufanele uyenze ngamasheya eTelefonica?
ITelefónica ingelinye lamagugu ayisisekelo emakethe yamasheya aseSpain, kepha kufanele ukuthi yini inani elengeziwe elethwa ukuthengwa kwamasheya alo
Ukuthwebula kuzoqala ukusebenza ngo-Okthoba futhi kungathinta ukutshalwa kwezimali kumasheya
Ama-FANGs amanani okugcina okufika emakethe yamasheya, kepha uyazi ukuthi yiziphi izici ezifanele kakhulu zalezi ziphakamiso?
IDuro Felguera ikhiqize ukukhuphuka kwamanani ayo ngenxa yamahemuhemu ngokwakhiwa kwabaninimasheya
Inqubo yeCatalan okwamanje ayikuthonyanga ukusebenza kwamanani wemakethe yamasheya nezintshisekelo eCatalonia
I-euro idlula amadola ayi-1,20 futhi imakethe yamasheya iyawa
I-euro ifinyelele emazingeni ayo aphezulu uma iqhathaniswa nedola, okungakhuthaza izimali zaseYurophu ukulungisa izindawo ezimakethe
I-Iberdrola ingelinye lamagugu okungafanele lilahleke kuphothifoliyo yokutshala imali, kepha ngabe uyazi izizathu zokusebenzisa leli qhinga?
Izihloko zingaba yingozi ukwenza utshalomali, ikakhulukazi uma zingatholakali kalula ezimakethe
Kukumiphi imikhakha lapho kufanele ubaleke lapho ukuhlasela kwamaphekula kwenzeka?
Kuzodingeka ukuthi ngaphambi kokuhlaselwa kwamaphekula futhi uyeke ukuthatha izikhundla kokunye ukuphepha emakethe yamasheya kanye nemikhiqizo yezezimali
Ingabe ukunqotshwa kwemali mboleko phakathi kwamabhizinisi kulula?
Ukushintshaniswa kwesibambiso esisodwa somunye ngokufakwa ngaphansi kwaso isu elibekiwe lokonga imali
Ubungozi abukho emakethe yamasheya, kodwa kumabhondi
Imakethe yezibopho ingaletha isimanga esibi kakhulu kusukela manje kuqhubeke, kepha ingabe ufuna ukuthi yiziphi izizathu zangempela?
Yini ongayenza ngokuzuza kwemali emakethe yamasheya?
Esinye sezihluthulelo emabhizinisini ukuphatha izinzuzo ezinkulu kusukela ekusebenzeni okwenziwa kahle kakhulu
Ngabe ukuhlaselwa kweBarcelona kuzothinta imakethe yamasheya?
Kuleli sonto sizobona imiphumela yangempela yokuhlaselwa kweBarcelona ezimakethe zezimali futhi uma kungathinta amanani athile
Ukhetho lwaseJalimane luthinta kanjani imakethe yamasheya?
Ukuqokwa okhethweni okulandelayo okunemiphumela emakethe yamasheya kuzoba ngoSepthemba, lapho kubonakala sengathi u-Angela Merkel uzoqhubeka
Ukukhuphuka kwamahhala kusimo se-bearish kumanani wenzalo
Uma nje amanani wenzalo ephansi, azosiza ekwakheni isimo samahhala sokukhuphuka kwamasheya.
Yini okufanele uyenze ngokulondolozwa kwethu ngemuva kwamaholide?
Ukubuyiswa kwamaholide kungumzuzu ofanele kakhulu wokuhlela kabusha konke ukutshalwa kwezimali futhi uma kuyintengo yokukushintsha ngokwesikhathi esimaphakathi
Baxwayisa ngomnotho e-United States
Kunamazwi amaningi aya exwayisa ngokudodobala komnotho wase-United States nokuthi kuzoletha inqubo ye-bearish emakethe yamasheya
INorth Korea ibhalwe ohlwini lokuhwebelana kwamasheya emhlabeni jikelele
Isimo sangaphambi kwempi eNyakatho Korea sithinta izimakethe zamasheya esontweni elibi kakhulu lonyaka futhi lokho kungahle kwehle kakhulu
Amanani wokusebenzisa ngokunenzuzo ukuqhuma kwezitini eSpain
Isitini sibuyele kwimfashini emakethe yamasheya futhi naso uchungechunge lwamagugu angasetshenziswa ukuvula izikhala ezimakethe
Ingabe kufanele uye ekwandisweni kwemali enkulu?
ISantander bank iqale ukukhuphuka kwemali yayo, lapho izobaluleka kakhulu uma kulula ukuyibhalisela noma cha
Amanani amahlanu wokutshala imali ngenyanga ka-Agasti
Unezinhlu zamanani ozowathola ngenyanga ka-Agasti futhi ezingaziphatha kangcono kunesilinganiso sikazwelonke emakethe yamasheya
Ushintsho kuthrendi luchaza ukuthi isu lokutshala imali kumele lihlukaniswe ukuze lihambisane nesimo esisha sokuphepha okukhethiwe.
I-India ingenye yezimakethe ezivelayo lapho kuzoba khona izindawo eziningi zokwenza imali enenzuzo, uyazi ukuthi yiziphi izizathu?
Izifiso zabalamuli bezezimali zingaholela ekukhishweni kochungechunge lwemininingwane emincane kakhulu yokuqhathanisa ukudukisa abanye abatshalizimali
Ibhalansi yezinyanga eziyisikhombisa zokuqala zonyaka emakethe yamasheya
Ibhalansi yemakethe yamasheya yaseSpain ezinyangeni eziyisikhombisa zokuqala zonyaka icace kahle, ivuselela ngaphezu kwe-12%
Kufanele uthenge nini esikhwameni?
Ukuthenga kufanele kwenziwe kuphela ezimweni ezithile ukuze umphumela wemisebenzi wenelise
Tshala imali ezimeni ezingezinhle
Ukutshala imali kulondolozwa ezimweni ezingezinhle, kungakhethwa uchungechunge lwemikhiqizo ejwayelekile kakhulu yezezimali
Izinzuzo ngezimali zokutshala imali
Izimali zokutshala imali zingakhipha nokukhokhwa kwezinzuzo, yize okunikezwayo emakethe kuphansi kakhulu kunasemakethe yamasheya.
UMario Draghi: umlumbi oqhuba imakethe yamasheya
Vele, amazwi kaMario Draghi asephenduke izixazululo zezikhwama, ngandlela thile.
Izifundo eziyi-10 zokutshala imali zabahwebi
Abahwebi bangangenisa uchungechunge lwamathiphu okwenza inzuzo ekusebenzeni kwabo ezimakethe zezimali ngempumelelo enkulu
Ukhiye we-Ibex 35 usezingeni lama-euro ayi-10.300
I-ibex 35 inokwesekwa okubaluleke ngokukhethekile ezindaweni ezingama-10.300 XNUMX ezizonquma indlela yamasheya aseSpain
I-Inypsa ne-Urbas bahola ukukhuphuka kwemakethe yamasheya aseSpain
ama-urbas ne-inypsa amanani amabili azuze kakhulu kulo nyaka, kokunye angaphezulu kuka-100%
Umehluko phakathi kwesikweletu nokudonswa kwemali
Kokubili ama-akhawunti wesikweletu nawokudonswa kwemali ayingxenye yempilo yethu yansuku zonke, futhi njengoba isikhathi sihamba, izindlela zokukhokha sezishintshile
I-USA ne-European equities
I-equities iletha inkinga ngokuthi ngabe kungcono yini ukutshala imali ezimakethe zase-US ezwenikazi lase-Europe
Izinyathelo zokuphepha zokuhweba ezimakethe zamasheya ezivela kwi-Intanethi
Ukusebenza nge-intanethi kunezinzuzo eziningi, kepha futhi kunezingqinamba, imvamisa ngenxa yokuphepha kokusebenza.
Izimali ezikhethekile zokutshala imali zokuqasha kuleli hlobo
Kunochungechunge lwezimali zokutshala imali, ngenxa yokuthi zivela, zingakhanga kakhulu ukwenza ukonga kube nenzuzo kulo nyaka.
I-Unicaja ne-Ibercaja IPO zilindile
I-UnIcaja ingeyokugcina ezinkampanini zezezimali ukuhlala emakethe yamasheya yaseSpain, kulindwe ukunyakaza kwe-Ibercaja